I-Android Auto iphinde yenziwa ngokutsha ngophuculo kwibar yokuhamba kunye nezaziso | I-Androidsis
I-Android Auto iphinde yenziwa ngokutsha ngophuculo kwibar yokuhamba kunye nezaziso
I-Android Auto yinguqulelo ye-Android eyilelwe ngokukodwa ukusetyenziswa kwizithuthi. Ngenye imini ngaphambi kukaGoogle I / O, abafana bakwaGoogle basandula ukukhupha uhlaziyo olukhulu olusinika ngokwahlukileyo Izinto ezintsha ezinobuhle esikuxelela apha ngezantsi kwaye ngokuqinisekileyo iya kwamkelwa kakuhle ngabasebenzisi.
Eyokuqala kwaye mhlawumbi ebaluleke kakhulu yile ibar entsha yokukhangela, ibekwe emazantsi esibonakalayo. Ngale bar yokuhamba, unokujonga imiyalelo yenyathelo ngenyathelo, umculo kunye nolawulo lwepodcast, sebenzisa uMncedisi kaGoogle, kunye nokufikelela kwizaziso. Ngaphambili, ibar ibonakalise naluphi na uhlobo lweopopayi ukuqinisekisa ukuba ibisenza umsebenzi othile.
Ngokumalunga nezaziso, emva kohlaziyo lwe-Android Auto abasenamda kwiscreen sasekhaya, kuba iphepha lenziwe apho zikhona zonke nalapho sinokunxibelelana khona, ngoku uhlobo lokuqalisa usetyenziso, eya kusivumela usetyenziso olusithumela izaziso ngokukhawuleza.
I-aesthetics ye-Android Auto iphinde yahlaziywa, yangumxholo omnyama Enye yeenoveli zayo eziphambili, njengoko ifumaneka kulo lonke ujongano. Ukongeza, ifonti esetyenzisiweyo iguqulwe ukuze kube lula ukuyifunda. Olu hlaziyo luye lwasetyenziselwa ukuziqhelanisa nazo zonke iintlobo zescreen, nokuba sesikwere okanye ngaphezulu.
UGoogle uveze olu hlaziyo kusuku olungaphambi kwe I / O kaGoogle, nangona ibhengezile olu hlaziyo lukhulu loyilo ayiyi kufika kude kube lihlobo kwasekuqaleni. Ndiyathemba ukuba ayenzeki njengezinye iinkqubo zokusebenza ezinje nge-Android Wear (ngaphambi kokuba ibizwa ngokuba yi-Wear OS), inkqubo yokusebenza apho inani elikhulu lezinto ezintsha zabhengezwa phantse kwiminyaka emithathu edlulileyo, kodwa kwathatha unyaka ukufikelela kwezi zixhobo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Android Auto iphinde yenziwa ngokutsha ngophuculo kwibar yokuhamba kunye nezaziso